မြန်မာပြည်မှာ မြန်စေချင်ပါသည် ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinion - Op-ed » မြန်မာပြည်မှာ မြန်စေချင်ပါသည် ။
မြန်မာပြည်မှာ မြန်စေချင်ပါသည် ။
Posted by ကထူးဆန်း on Jan 23, 2013 in Opinion - Op-ed, Travel | 31 comments
ခရီးသွား … ခရီးသွား နဲ့ တသွား ထဲ သွား တစ်ခရီးထဲ ခရီး နေကြတဲ့ အချိန် ..
ဘက်စုံ ဒေါင့်စုံ က လုပ်ဖို့ မလွယ်ဘူး ဆိုတာ လည်း သဘောပေါက်မိပါရဲ့ ..
အဲ့ဒီ့ အထဲ က တစ်ခု ..ဘယ်သူမှ ဟ တာ မတွေ့မိသေးလို့ .. နဲနဲ လေး တော့ လျှာရှည် ကြည့် ပါရစေ။
ခရီးသွား ကျန်းမာရေး အာမခံ ပါ ။
နိုင်ငံခြားသားတွေ ခရီးသွားရင် အများစု က အာမခံ မထား မ၇ှိဘဲ မလာကြ ။ မသွားကြပါဘူး ။
အဲ မြန်မာပြည် သွားကြမယ်ဆိုတော့ ပို ထား ကြမှာ မလွဲပါဘူး ။ မြန်မာပြည် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အားနည်းတာ ။ အရေးပေါ် ကုသ နိုင်စွမ်း မရှိတာ ။ ရပ်သိရွာသိ ကမ္ဘာသိ အားလုံး အသိပါ ။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာတွေ ရဲ့ ဖော်ရွေမှု ၊ မြန်မာတွေရဲ့ အပြုံး ၊ မြန်မာတွေ ရဲ့ ကူညီတတ်မှု့ တွေ ကြောင့် မြန်မာပြည် လာ နေကြပါတယ် ။ လာသူ အများစုကလည်း အသက်ကြီးပိုင်းတွေ များပါတယ် ။ အသက်ကြီးပိုင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု့ ပိုမိုလိုအပ်ပါတယ် ။
ကိုယ့်ဆီမှာ မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး ၊ မကုသ ပေးနိုင်သေးဘူးထား ။ ကုသပေးနိုင်တဲ့ ဆီ ကို အမြန်ဆုံးရောက်ဖို့ လုပ်ပေး နိုင်သင့်ပါတယ် ။ ဘန်ကောက် က မြန်မာပြည် နဲ့ တစ်နာရီ အတွင်း သွားရောက်နိုင်တဲ့ နေရာပါ ။
ဒါကြောင့်သူတို့ တစ်ခုခု ဖြစ်ပြီဆို ရင် အာမခံကုမ္မဏီက ၀င်ရောက် ဆောင်ရွက် ကယ်ဆယ်ဖို့ အသင့်ပါဘဲ ။ အဆင်မသင့်တာက ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ပါဘဲ ။ မြန်မာပြည်တွင်း ဖြစ်ပဟ ဆိုလျှင်တော့ လက်ပိုက်ကြည့်ရတဲ့ အဖြစ်တွေပါ ။
ဒီနှစ် ခရီးသွားရာသီမှာ ငပလီမှာ ခရီးသွား အဖိုးကြီးတစ်ဦး စက်ဘီး စီးရင်း မတော် တဆ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကုန်းအဆင်းမှာ သူ့ ဟာသူ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ မြောင်းထဲ ထိုးကျခဲ့ပါတယ် ။ ဒါဏ်ရာ သိပ်တော့ မပြင်းထန်ပေမဲ့ သူ စိတ်မချပါဘူး ။ ခရီးသွား အာမခံ ၀ယ်ထားသူမို့ သူ အာမခံထားတဲ့ ကုမ္မဏီက လေယာဉ် မှာ ပြီး ဘန်ကောက် ပြန် ဆေးစစ်နိုင်လ်ိမ့်မယ်လို့ သူ ထင်ခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့ ကုမ္မဏီနဲ့ ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ် ။ သူ အာမခံဝယ်ထားတဲ့ ကုမ္မဏီကလည်း လေယာဉ်လွှတ်ပြီး သူ့ ကို လာခေါ်ပေးဖို့ အဆင်သင့် ပါဘဲ ။
ထုံးစံ အတိုင်း အဆင်မသင့်တာက တော့ ကျွန်တော် တို့ တိုင်းပြည် ရဲ့ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းတွေပါဘဲ။ လေယာဉ် ဆင်းသက်ခွင့် ရဖို့ အနည်ဆဲုံး သုံးလေးရက် ကြာပါမယ်တဲ့ ။ နောက်ဆုံးတော့ ငပလီမှာ နှစ်ရက် သောင်တင် ၊ ရန်ကုန်ပြန်ပြီးမှ ပုံမှန် လေကြောင်းနဲ့ ဘန်ကောက် ပြန်သွားရရှာပါတယ် ။
ကံကောင်းထောက်မခဲ့လို့ သူ့မှာ ဒါဏ်ရာ ဒါဏ်ချက် မကြီး ကျယ်ခဲ့ပေမဲ့ သူ နောက် ဘယ်တော့မှ မြန်မာပြည် မလာ တော့ပါဘူးတဲ့ ။ မြန်မာပြည်လာရတာ ကို ကျေနပ်တယ် ။ နှစ်ခြိုက်တယ် ။ ပျော်မွေ့တယ် ။ ဒါပေမဲ့ မတော် တဆ အသက်အန္တရယ် နဲ့ ရင်ဆိုင်ရမဲ့ အရေးကြီးခဲ့ရင် လုံလောက်တဲ့ အကူ အညီ မရနိုင်တဲ့ အတွက် နုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် တဲ့ …
အဲ့ဒီလိုပါဘဲ .. ပုဂံမှာ လည်း နိုင်ငံခြားသူ အမျိုးသမီးကြီး တစ်ဦး စက်ဘီး နဲ့ အလည်လွန်ပြီး အားအင်ကုန်ခန်း ပန်းဖျား ဖျားခဲ့ပါတယ် ။ ညောင်ဦး ဆေးရုံ နဲ့ သူတည်းတဲ့ ဟိုတယ်မှာဘဲ အတတ်နိုင်ဆုံး အနားယူ ကုသမှု ခံယူခဲ့ရပါတယ် ။
ထိုနည်း၎င်းပါဘဲ ။ ညောင်ရွှေမှာ အမျိုးသားတစ်ဦး အထက်လှန် အောက်လျှောဖြစ်ပါတယ် ။ ညောင်ရွှေ ကဆရာဝန် များနှင့် ကုသမှု ခံယူပေမဲ့ မထူးခြားလို့ တောင်ကြီးဆေးရုံ ကို ambulance မှာပြီး ပို့ပေးရပါတယ် ။ ambulance လို့ နံမည်တပ်ထားပေမဲ့ ပါဝင်တဲ့ စက်ကရိယာတွေကတော့ သိတဲ့ အတိုင်းမို့ သူပြောသွားတဲ့ မှတ်ချက်ကိုတော့ မပြောလိုတော့ပါဘူး ..
ဒါက ကျွန်တော် သိတာလေးတွေပါ ။ ကျွန်တော် မသိတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ ရှိနိုင်သေးပါသည် ။
ပြောချင်တာကတော့ အရေး ပေါ်ခဲ့ပြီဆိုရင် ဘယ်လို အကူ အညီ ပေးနိုင်မယ် ဆိုတာ တွေကို ဟိုတယ် တွေ ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း သမားတွေ ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ သိနိုင်အောင် လုပ်ထားဖို့ နဲ့ ၊ သူတို့ ၀ယ်ထားတဲ့ ခရီးသွား အာမခံ ကိုယ်စားလှယ်များ နဲ့ အလျှင်အမြန်ဆက်သွယ် အကူ အညီရယူဖို့ ၊ လေယာဉ်ဆင်းသက်ပြီး လာခေါ်ဖို့ ကို နေရာ ဒေသ မရွေး နာရီပိုင်း အတွင်း ခွင့်ပြုမိန့် ရအောင် လုပ်ပေးဖို့ ၊ ၀န်ကြီးဌာန တစ်ခု ထဲမှ တစ်ဦးက အလျှင်အမြန်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် တာဝန်ပေး တာဝန်ခံ ထားနိုင်ဖို့ လဲ အမြန်စဉ်းစားပြုပြင် သင့် ပြီဖြစ်ပါကြောင်း ။
( ယနေ့ (၂၃-၁-၂၀၁၃) ငပလီမှာ ၇၉ နှစ် အရွယ် နော်ဝေး နိုင်ငံသား တစ်ဦး ရေနစ်သေဆုံးခဲ့ ကြောင်း ကြားသိခဲ့ရလို့ အရေးပေါ် ရေးသားလိုက်ကြောင်းပါ ။ )
အမှုတစ်ခုခုဖြစ်ရင် အစိုးရဆေးရုံကိုပဲ သွားရတာကို မကန့်ကွက်လိုပေမယ့်
အရေးပေါ် လူနာအတွက် အရေးပေါ် အခြေအနေတွေကို တွေးပေးကြရင်ကောင်းမယ်
လုပ်ထုံးလုပ်နည်း က အဓိက ဖြစ်နေတာ ထက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပါ မရှိ။ မသိ ။ ရှိလဲ တာဝန် မခံ ကြနဲ့ ဖြစ်နေလို့ပါ ဦးသကြားရယ်..
အင်းးးးးးးး (ဦးမာဃ နောက်က လိုက်ခြင်း)
ရင်လေးတယ်..ရင်လေးတယ်… တစ်သက်လုံးပိတ်လာတဲ့ တံခါးကို နည်းနည်းလေး ဖွင့်လိုက်ပါတယ်..(နောက်လည်း ဆက်ဖွင့်ဦးမှာ)… ၀င်လာလိုက်ကြတာ… ဝေါကနဲ….
ဖြစ်ချင်တော့… အထဲမှာက မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်…. ဘာမှလည်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးမရှိ… ရှိတာလေးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ်ဆိုတော့လည်း..အချင်းချင်းက ညှိလို့မရသေး..
လေးလေးထူးဆန်းရေ..ဘာမှမဆိုင်ပေမယ့် စိတ်ထဲရှိတာ မန့်လိုက်ပါတယ်… အာမခံကိစ္စကတော့ စာပြန်ဖတ်ပြီးမှပဲ..၀င်ပွားတော့မယ်…
မဆိုင်မရှိ ။ မန့်သာ မန့်ပါ ။ မြိုင်မြိုင် ဆိုင်ဆိုင်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့ .. :hee:
နည်းနည်းတော့ ကြာပြီထင်ပါတယ်၊ အမေရိကန်တိုးရစ်အမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်လည်း ပုဂံက ထူးပိုင်ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ရေချိုးရင်း water heater ကနေ ဓါတ်လိုက်တာ ဘန်ကောက်ကနေ chopper ကို လှမ်းခေါ်လို့ရပေမဲ့ ဒီဘက်ကဆင်းခွင့်မပေးလို့ အသက်ဆုံးပါးသွားကြောင်း (ဂဇတ်မှာဘဲထင်တယ် ) ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
သေသေချာချာလည်း သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတော့ တစ်ခုခုဖြစ်လာရင်တာဝန်ရှိသူကဘယ်သူမှန်းမသိ၊ အဆုံးအဖြတ်လည်းမပေးရဲဘူးထင်ပခင်ဗျ။
အဲ့ဒီ့တုန်းက အမျီုးသမီးကြီးရဲ့ သမီးကိုယ်တိုင်က ဆရာဝန်နော် ..
အဲ့ဒီဆရာဝန်မ ရေးခဲ့တာပါ ။
The medical helicopter from Thailand that should arrive in an hour after calling couldn’t land in Myanmar without at least 24-hr prior authorization. It will take at least5hours to get to other hospital and there’s no well-equipped ambulance.
It took usawhile to accept reality that we were losing our mom. Nothing is going to be the same from now on.
“ Lethal Electrocution in Bagan. True story? ”
Feb 03, 2012, 9:44 AM
Flew back to Boston few days ago, I was still in shock and couldn’t believe if this story really happened to me and my family. Ran in to my advisor, he hugged me tightly with condolence. I shared my story, his tears made me close my eyes forawhile. The end of our conversation came the conclusion that I should share my story. People should know about my story and this story should lead to some CHANGES. The similar story shouldn’t happen again to anyone.
သူများတွေက ဘာလုပ်ဖို့လိုမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားပြီးလုပ်တာ
ိကျုပ်တို့ဆီက လေးတန်းမအောင်တဲ့ဦးနှောက်ပိုင်ရှင်တွေက ဘာလုပ်မှဖြစ်မယ် ဆိုမှလုပ်တာ..
လူတချို့က သူများအသက်ကို နှမြောလေ့မရှိပါကြောင်း….
အဲလိုလူတွေနဲ့ သူတို့အစွယ်အပွားတွေ အကုန်ထွက်သွားတဲ့နေ့မှ လူကလူနဲ့တူမှာဖြစ်ပြီး အလုပ်ကအလုပ်နဲ့တူမှာဖြစ်ပါကြောင်း…..
ယူအက်စ်မှာ MDဖြစ်နေတဲ့.. မြန်မာဆရာဝန်တွေထောင်ချီရှိတယ်..။ သူတို့တွေက.. မြန်မာပြည်မှာဆေးရုံထောင်စားဖို့ကောင်းတယ်..။
ကိုယ့်လက်ထဲကပိုက်ဆံ.. သူများသွားလှူနေသလိုပဲ..။ အနိစ္စ..
ဆိုတော့.. တိုးရစ်ဇင်ကတနှစ်ဘီလီယံချီရှာပေးတော့မှာဖြစ်တာမို့.. အစိုးရက အထူး(အထူး)အာရုံစိုက်လုပ်သင့်ပါကြောင်း…
Bangkok, July 16, 2012 – Thailand recordeda31% increase in tourism receipts in 2011 over 2010, according to Ministry of Tourism and Sports figures. The total earnings of 776 billion baht (US$25.45 billion) were also well above the original target of 716 billion baht (US$ 23 billion).
ထိုင်းက တိုးရစ်ဇင်က၀င်တဲ့ဝင်ငွေက.. မြန်မာပြည်တပြည်လုံးရှိသမျှရေနံတွေတူး..သတ္တုတွေဖေါ်နေရာကရတဲ့ငွေထက်.. ၃-၄ဆလောက်များနေသေးတယ်..။ ဒုတိယံမိအနိစ္စ..
လူ့အသက်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့အကျင့်လေးတွေ ပျောက်နေလို့ပါ။
ပြည်တွင်းကလူဖြစ်စေ၊နိုင်ငံခြားသားဖြစ်စေ ကျန်းမာရေး/အသက်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် အရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ဖြတ်ကျော်ခွင့်ပေးဖို့ ဆက်သွယ်ရမယ့် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သူ (အလှည့်ကျဖြစ်ဖြစ်ပေါ့)
တစ်ဦးရဲ့ ဖုန်းနံပါတ် တရားဝင်ကျေငြာထားပေးသင့်ပါတယ်။
Travel & Tour လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေစုပေါင်းပြီး
ပြည်တွင်းမှာ အဆင့်မြင့် အရေးပေါ် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ ကုသမှု့
ပြုပေးနိုင်တဲ့ ဆေးရုံတွေ ပေါ်လာအောင်လုပ်ရမှာပေါ့…
ဦးကြီးမိုက်ရေ ..၀န်ကြီးလည်း သိပါတယ် .. သူကိုယ်တိုင်လည်း မစွမ်းနိုင် ဖြစ်နေပုံရပါတယ်။လုံခြုံရေး လုံခြုံ့ရေး နဲ့ လုံခြုံရေးကို ကျော်ဖြတ် နိုင်ပုံ မပေါ်သေးပါဘူး ။
သူကြီးပြောသလိုသာ အမြန် ဖြစ်လာနိုင်ပါစေ ဆုတောင်းရတာဘဲ ။
စီမံကိန်းတွေတော့ စာရွက်ပေါ်မှာ အပြည့် ဘဲ ။ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ သာ နှောင့်နှေး နေကြတာ ။
အဲဒါနဲ့ဘဲ ဖွင့်လိုက်တဲ့တံခါးက အလင်းတံခါးမဟုတ်ဘဲ အမှောင်တံခါးဖြစ်တော့မယ်…
ကိုယ့်နိုင်ငံသားတောင် ကိုယ်ဂရုမစိုက်တာ နိုင်ငံခြားသားဆိုလို.ကတော့.. ဝေးသေး…
ဆေးရုံတက်လို. တံခါးစောင့်ကို ၀င်ကြေးပေးနေရတဲ့ ဒီနေရာ…
ယာဉ်တိုက်မှုတစ်ခု၊ဒါမှမဟုတ် ဓားထိုးမှုတစ်ခုဖြစ်ရင်….. ကိုယ်တာဝန်ယူရမှာစိုးလို. ဘယ်ဆေးရုံမှ လက်မခံ ဒီအတိုင် သေမှာထိုင်စောင့်ပေတော့..ဒါပဲ..
ကြက်ခြေနီတောင် တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ၀င်ကူညီချင်ရင် တပ်ရင်းမှူးဆီဖုန်းဆက် အကြောင်းကြားရသေးတယ်…. မြို.နယ်မတူရင် ၀င်ကူညီလို.မရဘူး အကြောင်းကြားပီးမှ ကူညီလို.ရတယ်… အေးရော..
အဲလောက်အလုပ်ရှုပ်တာ မမြင်ချင်ယောင်ပဲ ဆောင်တော့မှာပေါ့….. ကဲ အဲဒါ အဲဒါ…..
မပြောချင်ဘူး မပြောချင်ဘူးးးးးးးးးးးးး ပြောကိုးးးးးးးးမပြောချင်ဘူး……..
ဟိဟိ ဒီတစ်ခါတော့ တိုက်တိုက် လွဲပြီ ထင်တာဘဲ ။။ ကိုယ့်နိုင်ငံသားသာ ဂရုမစိုက်တာ .. … မတွေ့ဖူးလား ..ဟဲဟိုးလေယာဉ်ပျံပျက်ကျတော့ ချက်ခြင်း ဘန်ကောက်ကိုပို့ပေးလိုက်တာ..
ရေခဲတောင်ပေါ် အပျော်ခရီးထွက်တဲ့သူကိုလည်း ဟိုကိုခေါ်ကုပေးပါတယ်နော်…
ပြုပြင်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။မြန်မာပြည်မှာ တိုးရစ်တွေ အ၀င်များပေမယ့် ဟိုတယ်မလောက်ငမှု၊ အဆင့်အတန်းရှိ သပ်ရပ်တဲ့ စားသောက်ဆိုင် နည်းပါးမှု၊ဧည့်လမ်းညွှန်နည်းပါးတဲ့အတွက် လိုင်စင်မရှိသော စကားမတောက်တခေါက်ပြောတတ်တဲ့ သူကို ဂိုက်အနေနဲ့ ထည့်ပေးတာကြောင့် ဧည့်သည် ခရီးသွားလာရတာတွင် အဆင်မပြေမှု စတဲ့ ပြသ၁နာတွေကိုလည်း စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်ပေးစေလိုပါတယ်။
မြန်မာပြည် လာလည်တဲ့ တိုးရစ်များ မိမိအသက်ကို မိမိအာမခံနိုင်ရင် ၀င်သာလာလို့တောင်ပြောရမလိုဘဲ။
မြန်မာပြည် အသက်အာမခံစနစ်က ကျယ်ကျယ်ပျံပျံဖြစ်ဖို့ အတော်လိုသို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှေက်မှု့ ကတော့ မိမိဖာသာမိမိစောင့်ရှောက်စနစ်ဘဲရှိသေးတာပါ။
အစိုးရဆေးရုံတွေမှာ စရိတ်မျှပေး ကျန်းမာရေးဆိုတာကို အဲဒီဆေးရုံက ၀န်ထမ်းတွေဘယ်လိုနားလည်ကြ လဲတော့မသိဘူး၊ စရိတ်မျှပေးဆိုတာ ရောက်လာတဲ့လူနာတွေက သူတို့စရိတ်ကိုမျှဝေခံစေတာလို့များ အမှတ်ထားကြသလားမသိဘူးဗျာ။ အဲဒီလို စရိတ်မျှပေး ကျန်းမာရေးဖြစ်နေတာမျိုးတွေ့ရတယ်ဗျ။
ကိုယ်မသိတဲ့ အကြောင်းအရာများဖြစ်လို့ဖတ်ရုံသာ ဖတ်သွားပါတယ်ဗျို့ 
စွန့် လွှတ်စွန့် စား မြန်မာပြည် ခရီးသွားလုပ်ငန်း …. လို့ ကြော်ငြာရင်ကောင်းမလား လို့ 
မန့် တာလေးတွေ စောင့် ကြည့် လိုက်ပါဦးမယ်ဗျို့ ……
ဘာမှတော့ကာ ထွေထွေထူးထူး သိပ်ပြီးမပြောတတ်လို့ လေ့လာမှတ်သွားသွားပါကြောင်းးးးးးးး
ဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့ပြီးသကာလ အတွေးတွေ ဗလပွနဲ့
ဟိုဘက်မှာ မန့်သလိုပဲ မန့်ချင်တယ်။
ရွာထဲ သိပ်မ၀င်ဖြစ်လို့ စာတွေ သိပ်မဖတ်ဖြစ်ပဲ…
ရွာထဲဝင်လာတော့လည်း ဖတ်ချင်စရာတွေက များလွန်းလို့…
မျက်စိ လေးလုံးတောင် မလောက်ဘူး ဖြစ်နေပြီ။
ကျနော်တို့ဆီမှာက ဖြစ်လာရင် ပြဿနာတက်လာမှာကြောက်ကြပါတယ်။
အဲတော့ သူအဆင်ပြေတာ မပြေတာ နောက်ကိစ္စ။
ဖြစ်လာရင် ကိုယ်လွတ်အောင် စည်းဘောင်ထဲက(စာအုပ်ကြီးအတိုင်း)လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော် က ဘာသတိထားမိလဲဆိုတော့ အထက်လူကြီးတွေကလည်း တာဝန် ယူလုပ်ပါလို့ တော့ ပါးစပ်က ပြောတယ် ။ တာဝန်ယူလုပ်မိလို့ သူတို့ သဘောနဲ့ မတွေ့ပြန်တော့လဲ ဆူခံ ထိတတ်ကြတယ် . အဲ့ဒီကနေစလို့ အထက် အမိန့် မရမခြင်း မလုပ်တော့တဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်လာတော့တာဘဲ။
ရွှေပြည်တော်ရေ မျှော်နေဆဲ ဝေး:::::::::::
ဓူဝံကြယ်စင် မြင်နေလည်း ဝေး:::::::::::::::::
ဒီနေရာပဲ ရလို့ ဒီ နေရာက စာသားတွေပဲ အော်သွားတယ်။
မတူတဲ့ဘေးထွက်အမြင်နဲ့ ပြောကြည့်မယ်နော် ………။ အော်ဒီလူတွေ ……… သူများဆီလာပြီး အေးအေးဆေးဆေး မနေကြဘူး စက်ဘီးစီးရတာနဲ့ ဘာနဲ့….။ မြန်မာပြည်က လမ်းဆိုးဆိုး သူတို့မို့စီးရဲ ပလေတယ်……။ သူတို့ကလည်း ပြန်ပြောမှာပဲ……. ဒီလို ကြီးမှန်းမသိလို့ လို့ အင်း ကိုပေ တွေ့ရင် ကွန်ဆာဗေးတစ်လို့ ပြောခံရဦးမယ်……..။ လစ်မှ …။